Igodo nke Bixby nke Galaxy S8 na Note 8 nwere ike inwe nkwarụ | Gam akporosis
Enwere ike iwepu bọtịnụ Bixby na Galaxy S8 na Rịba ama 8
Ọkọlọtọ abụọ nke Samsung ulo oru na afọ a, na Galaxy S8 na Rịba ama 8, ha wetara njiri mara pụrụ iche. Ekwentị abụọ nwere bọtịnụ bixby. Ihe mgbakwunye bọtịnụ ekele nke ị nwere ike rụọ ọrụ Bixby, nke nnyemaaka ngwaọrụ. N'ụzọ dị otú a, ọtụtụ mba Korea sonyere omume nke ndị enyemaka na-akwadoghị. Agbanyeghi na atumatu a akachaghi nke oma.
Site na mmalite enwe nsogbu na Bixby na bọtịnụ ahụ. na ngwa ngwa mmeba nke Samsung nnyemaaka gaa n'asụsụ ndị ọzọ abụwo isi nsogbu. Ọ bụ nnukwu ọdịda na mgbasawanye mba ụwa. Nke mere ọtụtụ ndị ọrụ achọghị iji ọkachamara ahụ. N'ikpeazụ, mgbe ọnwa nke nsogbu gasịrị, Samsung emeela ihe.
Otu mba Korea emeela mkpebi dị mkpa. Mkpebi nke ha yiri ka ha kwenyere ọdịda nke Bixby. Na mmelite ohuru ya, Ndị ọrụ Galaxy S8 na Rịba ama 8 nwere ike gbanyụọ bọtịnụ Bixby. Ihe ndị ọrụ na-achọ ime ogologo oge. Ugbu a, ọ bụ eziokwu.
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga ụlọ ọrụ ugbua nyere nhọrọ iji kwụsị bọtịnụ ahụ. Agbanyeghị, ọ dị ka enwere ahụhụ na bọtịnụ ahụ ka na-arụ ọrụ dịka ụlọ ụgha. Ya bụ, ọ bụrụ na agbanye Bixby bọtịnụ ga-arụ ọrụ. O yiri ka ụlọ ọrụ Korea edoziwo ahụhụ ahụ. Ugbu a ọ ga-ekwe omume gbanyụọ bọtịnụ Bixby n'ezie.
Nke a ga-ekwe omume ekele ọhụrụ Bixby Home melite. Oge na-abịa bọtịnụ agaghị emeghachi n'enweghị ihe ọ bụla. Maka ndị ọrụ nwere otu ngwaọrụ abụọ a, mmelite ahụ ga-abata na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, Samsung egosila otu esi enweta ya.
Ọ ga-adị mkpa ịga Ngwa égwu, tinye ngwa m wee pịa nhọrọ mmelite. Wayzọ a ị nwere ike ichefu kpamkpam banyere Bixby. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ, enwere nhọrọ ọzọ nke gaara aka mma. Nye ndị ọrụ nnwere onwe ịhazigharị bọtịnụ ahụ. N'ihi ya, ha na-enye ya ihe ọzọ mgbe ha na-eche Bixby na spanish bịarute oge ụfọdụ. Kedu ihe ị chere gbasara mkpebi Samsung?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Enwere ike iwepu bọtịnụ Bixby na Galaxy S8 na Rịba ama 8
Google Daydream View ugbu a na Googlelọ Ahịa Google na Spanish
OnePlus na-ebipụta foto izizi nke OnePlus 5T